Wayyaaneen PONDI gurgachuun hafe lubbuu isiitiinuu poolisa jalattai akka dheessitu dirqamte. | Oromia Shall be Free
Wayyaaneen PONDI gurgachuun hafe lubbuu isiitiinuu poolisa jalattai akka dheessitu dirqamte.
bilisummaa August 31, 2013	Comments Off on Wayyaaneen PONDI gurgachuun hafe lubbuu isiitiinuu poolisa jalattai akka dheessitu dirqamte.
Hawaasni Oromoo fii Toophiyaa guyyaa ar’aa magaalaa lammaffaa biyya Suweedin Goteborgi keessatti harka wal qabachuun garee Wayyanee ta maqaa jaarumsa kuurii laga Abbaay jedhuun maallaqa ummatarraa funaanuuf guyyaa ar’a Hagayya 31 bara 2013 dhufte turte. Haata’uu hawaasni wal yaame gurmuun bakka isaan walgayuuf itti karoorfatanitti itti dhaquun akeekni saanii akka hin milkooyne addaan facaasan, qarshiin namarraa funaanuuf dhufan hafee mataa ofiitiifuu poolisaa jalatti dheessuun achirraa baqatanii jiru..Guutuu dhimmaa kanaa viidiyoo kana daawwadhaa!!
Previous Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee Akka fedha kiyyaan hundumaahuu dhabe..
Next Yeroo amma kanatti lubuun oromoota heduu yeroo gaaffii malee badaa jiruudha, maalif “stop killing Oromo” jechuullee dadhabne ??